Thursday, 03 November 2011 10:42
'मेरो एउटा साथी छ' ले नेपाली सिनेमा मेकिङमा ट्रेन्ड स्थापित गरिदिएको थियो । 'मेरो लभस्टोरी'बाट त्यस्तो के ट्रेन्डको अपेक्षा गर्ने ?
'मेरो एउटा साथी छ' मा जुन ल्याप्सेसहरू भएको महसुस गरेका थियौं, त्यसलाई नै कभर गरेर त्योभन्दा राम्रो सिनेमा बनाएका छौं । स्टोरी, कन्टेन्ट र मेकिङको आधारमा पनि राम्रो फिल्म बनेको छ यो । एकैचोटी ठूलो परिवर्तन कुनैपनि सिनेमाले गर्नसक्ने कुरा होइन । सबैजनाको एकीकृत प्रयासमा त्यो हुन्छ । जुन गति लिइराख्या छ नेपाली फिल्मले, जुन विकासको उन्मुख भैरहेको छ, त्यसमा सहयोग गर्छ । त्यसतर्फ हामीले कदम अघि बढाउँछौं ।
पहिलो प्रोजेक्ट 'घातक', 'मेरो एउटा साथी छ' हुँदै पछिल्लो 'मेरो लभस्टोरी'सम्म आइपुग्दा आइकोरले फिल्म प्रोडक्सन, मार्केटिङ, प्रमोसन र पब्लिसिटीमा कस्ता परिवर्तनको अनुभव गर्‍यो ?
'घातक' सातवर्षअघि बनेको सिनेमा हो । त्यो समयमा हाम्रो इन्डष्ट्री एकदमै धराशायी र पीडित टाइममा थियो । त्यो बेलामा कसैले पनि त्यति धेरै मात्रामा फिल्म निर्माण पनि गरेका थिएनन् । हामीलाई पनि निकै अप्ठ्यारो भएको थियो, उद्योगलाई नियालेर बुझ्नको लागि । मार्केटिङका लागि त्यस्ता मान्छेहरू चिनेका थिएनौं । प्रक्रीया र माध्यमहरू थाहा थिएन । पैंतिस लाखको फर्मुला फिल्म 'घातक'मार्फत हामी छिरेको हो । त्यसपछि 'राज्य' र 'मेरो एउटा साथी छ' भन्ने फिल्म बनायौं । हामीले जाने, बुझेको र थाहा भएको कुरालाई प्रयोग गरेर दर्शकले रुचाउने फिल्म बनायौं । ट्रेन्डकै हिसाबमा पनि अहिलेसम्म 'मेरो एउटा साथी छ' बसेको छ । अहिले पनि नयाँ जेनेरेसले 'मेरो एउटा साथी छ'सँग फिल्मलाई तुलना गर्छ । सहरका मान्छेले फिल्म हेर्दैनन् भन्ने भनाईलाई हामीले तोड्यौं । सहरमा सबभन्दा चलेको फिल्म बन्यो यो । यसले नै हौसला दिएर हामी 'मेरो लभस्टोरी'सम्म आइपुगेका हौं । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जतिपनि नयाँ प्रोड्युसर आइरहेका छन् । यसबाट म निकै आशावादी छु । यद्यपी निर्माण लागत बढ्नु भनेको प्रोड्युसरलाई ज्ञान नभएर हो । अहिलेका प्रोड्युसरले त्यो कुरा महसुस गरेजस्तो लाग्छ मलाई । निर्धारित रकम र स्टोरीमा फिल्म बनायो भने बजेट बढ्दैन र त्यो फिल्म कहिल्यै घाटामा जाँदैन ।
पाँचमा दुईवटा फिल्मले मात्र नाफा कमाएको अवस्था यतिबेला । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा कुन कुराले आइकोरलाई सिनेमा निर्माण गर्न आकर्षित गरिरहेको छ ?
यो अहिलेको यथार्थता हो जसबाट धेरै सिनेमा पीडित छन् । फिल्म भनेको पैसा कमाउन बनाउने होइन । यो आर्ट र क्राफ्ट हो । फिल्म मेकिङ मात्र होइन कि जुनसुकै काम गर्दा प्यासन हुनुपर्दछ । फिल्म बनाउँदा पैसाको कुरो आउँछ । विश्वले नेपाललाई चिनोस्, नेपाली फिल्मलाई चिनोस्, हाम्रो फिल्म पनि कुनैबेला कान्स र ओस्कारमा पुगेर नोमिनेट होओस् । त्यो भनेको एकैदिनमा देखिने कुरा होइन । ग्राजुएल प्रोसेस हो यो । फिल्म बन्दै जान्छ, मान्छेले सिक्दै जान्छ । तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको होला, पाँचवर्षअगाडि बनेको फिल्म र अहिलेकोमा धेरै फरक आएको छ । धेरै अपग्रेडिङ भएको छ, प्राविधिक र निर्माणको शैलीमा । कुनैपनि उद्योग रातारात माथि पुगेको छैन । हलिउड, बलिड र कोरियनकै कुरा गरौं न । विकास हुन समय लाग्छ । यस्तो गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्छ । हामीले पनि सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं । हामीले फिल्म बनाउँदा अन्तराष्ट्रिय बजार र संस्कृतिमा अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तरिकाले गर्नुपर्छ । त्यो दिनलाई मैले नजिकै देखिरहेको छु । म यसप्रति विश्वस्त छु ।
साभार: मेरोसिनेमा, काठमाडौं १३ असोज
Last modified on Friday, 11 November 2011 11:09
More in this category: « पूजाको विहे पोस्टपोन्ड Aishwarya to give birth to Junior Bachhan »